एसिटामिनोफेन बनाम एस्पिरिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी भारी खेल समुदाय कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन प्रेस स्वास्थ्य
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एसिटामिनोफेन बनाम एस्पिरिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
एसिटामिनोफेन बनाम एस्पिरिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
एसिटामिनोफेन र एस्पिरिन दुई ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि हुन् जसले समान बिरामीहरूको उपचार गर्न सक्दछन्। यद्यपि दुबै औषधिहरूले ईन्फ्लेमेसनसँग लड्न मद्दत गर्न सक्छ, तिनीहरू विभिन्न ड्रग क्लासको हो एसिटामिनोफेन एक एन्टिपायरेटिक (ज्वरो रिड्यूसर) र एनाल्जेसिक (पीडा निवारक) हो जबकि एस्पिरिन एक ननस्टेरियल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) हो।
एसिटामिनोफेन टायलनोलको लागि जेनेरिक वा रासायनिक नाम हो। एनाल्जेसिकको रूपमा, यो माइग्रेन, मासिक पेटको, र गठियाबाट हल्का देखि मध्यम दुखाइको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। एन्टिपायरेटिकको रूपमा यसले ज्वरोलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
एसिटामिनोफेन काउन्टरमा विभिन्न सामर्थ्यहरूमा उपलब्ध छ। सामान्य खुराक 5२5 मिलीग्राम हो, जबकि mg०० मिलीग्राम अतिरिक्त शक्ति खुराक पनि उपलब्ध छ। एसिटामिनोफेनको अन्य रूपहरू लिन सकिन्छ जस्तै मौखिक क्याप्सूल, सिरप, र सपोसिटरीहरू।
एसिटामिनोफेन कलेजोको समस्या हुनेहरूमा सावधानीको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। सम्भावित कलेजो क्षतिको कारण, अधिकतम कुल खुराक प्रति दिन ,000००० मिलीग्राम हो।
Acetaminophen मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
एस्पिरिन एक जेनेरिक औषधि हो कहिलेकाँही एसिटिसालिसिलिक एसिड (एएसए) को रूपमा चिनिन्छ। यो एक एनएसएआईडी हो जसले ईन्फ्लेमेसनको उपचार गर्दछ र रगतको थक्काको गठन रोक्दछ। यस कारणले, यो हल्का दुखाइ वा ज्वरोको उपचार बाहेक स्ट्रोक र हृदयघातको जोखिम कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एस्पिरिन सामान्यतया 5२5 मिलीग्राम ट्याब्लेट वा mg१ मिग्रि चेवाबल ट्याब्लेटको रूपमा आउँदछ। खुराक उपचार भइरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। पाचन साइड इफेक्ट कम गर्न एन्टिक-लेपित ट्याब्लेटहरू पनि उपलब्ध छन्।
एस्पिरिनको रगत क्लोथ प्रभावको कारणले, यसले अन्य रक्ता पातलोसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ।
Aspirin मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
एस्पिरिन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
एसिटामिनोफेन vs एस्पिरिन साइड साइड साइड साइड
एसिटामिनोफेन र एस्पिरिन समान औषधिहरू हुन्। तिनीहरूको समानता र भिन्नताहरू तल तल परीक्षण गर्न सकिन्छ।
हृदयघात र स्ट्रोकको रोकथाम
एनाल्जेसिक / एन्टिपाइरेटिक
जठरांत्र संबंधी अल्सर
एसिटामिनोफेन जेनेरिक नाम हो
एस्पिरिन सामान्य नाम हो
मौखिक ट्याब्लेट, एन्टिक लेपित
30 .3..38 प्रति tablets० ट्याब्लेटहरू (5२5 मिग्रि)
120.० per प्रति १२० ट्याब्लेटहरू (mg१ मिलीग्राम)
एसएसआरआई / एसएनआरआई
एन्टिहाइपरटेन्सेभ्स (एसीई अवरोधकर्ता, एआरबी, बीटा ब्लकर, डायरेटिक्स)
एसिटामिनोफेन गर्भावस्था कोटि सी मा छ। भ्रुण क्षतिलाई इन्कार गर्न सकिदैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउँदा कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्छ भन्ने बारे डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
गर्भावस्थामा एस्प्रिनको प्रयोग सिफारिश गरिदैन जबसम्म फाइदाहरू जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा एस्पिरिन लिन सम्बन्धी चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्
एसिटामिनोफेन र एस्पिरिनले शरीरमा सूजन कम गरेर दुखाइ र ज्वरोको उपचार गर्ने काम गर्दछ। जे होस्, एसिटामिनोफेन एन्टिपाइरेटिक र एनाल्जेसिक हो जबकि एस्पिरिन एनएसएआईडी हो। एसिटामिनोफेन सामान्यतया हल्का दुखाइ र ज्वरोको लागि प्रयोग गरिन्छ। एस्पिरिनलाई मुटुको रोग लाग्नेहरूमा हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम रोक्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
दुबै एसिटामिनोफेन र एस्पिरिन खरिद गर्न सकिन्छ पर्चा बिना। तिनीहरूको खुराक अवस्था र लक्षणहरूको उपचारमा निर्भर गर्दछ। तिनीहरूसँग समान सुरक्षा प्रोफाइलहरू छन्।
एस्पिरिनको एसिटामिनोफेनको तुलनामा अधिक ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट हुन सक्छ। जे होस्, यो इन्टरिक-लेपित फारम प्रयोग गरेर अफसेट गर्न सकिन्छ। तैपनि, यसको पेटमा अल्सरको इतिहास भएकामा सावधानी अपनाउनुपर्दछ। अर्कोतर्फ, एसिटामिनोफेनलाई कलेजोको रोग हुनेहरू, विशेष गरी मद्यपान गर्नेहरूलाई सावधानी अपनाउनु पर्छ।
तपाईंको अवस्था र लक्षणहरूमा निर्भर गर्दै, एक औषधिलाई अर्कोमा सिफारिस गर्न सकिन्छ। तपाईका लागि उत्तम उपचार निर्धारण गर्न डाक्टर वा स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग यी विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्नु महत्वपूर्ण छ।
जीएम आहार:7दिन मा वजन घटाउनुहोस्
सामान्य चिसो कहिले सम्म रहन्छ?
योजना बी कहिले सम्म प्रभावकारी हुनेछ
म कसरी घर मा एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्ने?
चिन्ता र अवसाद meds कम से कम साइड इफेक्ट संग